Momba ny - Sword sword sy Crown
Môrmôna aho nanomboka ny taona 1980 ka hatramin'ny 2009. Tamin'ny fomba nahagaga dia nosokafan'Andriamanitra ny masoko tamin'ny fahamarinan'ny filazantsaran'ny fahasoavana tamin'ny Paka 2009. Taorian'ny nahitako ny maha-diso ny Mormona, dia nanatona ny olona very tamin'ny fivavahan-diso aho niaraka tamin'ny filazantsaran'ny Baiboly fahasoavana. Ny fitiavan'ny vadiko ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly, miaraka amin'ny fandalinana lalina ny Testamenta Vaovao mandritra ny herintaona dia nanampy ahy. Ny herin'ny teniny irery ihany no mahavonjy antsika rehetra amin'ny maizina sy ny famitahana. Raha te hahalala ny marina ianao dia hatolotr'Andriamanitra ho amin'ny tena fahazavan'ny fifandraisana mandrakizay amin'i Jesosy Kristy. Manana mari-pahaizana momba ny teolojia sy mari-pahaizana momba ny lalàna aho. Rehefa notanterahina hiaro ny Môrmôna aho dia tsy afaka… mifototra amin'ny lainga izany. Resy lahatra aho tamin'ny alàlan'ny fikarohana sy porofo fa marina ny filazantsaran'ny fahasoavana ara-Baiboly. Raha manana namana na olon-tianao voafitaky ny fivavahan-diso ianao dia zarao amin-kerimpo ny fahamarinana momba an'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavany mahagaga. Hisy fahasamihafana mandrakizay.